Indawo yokufihlakala elwandle eneMibono yoLwandle kunye nePoli enkulu yaBucala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJohn And Libby
Vumela ukukhanya kwasekuseni kungene kwibalcony. Yenza isidlo sakusasa ukuze uqalise kakuhle kwimini yemidlalo yamanzi kwiilwandle ezikufutshane okanye uhambo olukhuthazayo ukuya kwi-headland. Buyela kwindlu yangoku nenemibalabala eneendawo ezininzi ezipholileyo zokutshaja, ngaphakathi nangaphandle. Phumla ecaleni kwedama okanye uqubhe imijikelo ethile. I-airconditioning kwigumbi eliphezulu kwigumbi lokuhlala / lokuhlala / indawo yokutyela kunye negumbi lokulala ngeentsuku zasehlotyeni.
Vumela ukukhanya kwasekuseni kungene kwibalcony. Yenza isidlo sakusasa ukuze uqalise kakuhle kwimini yemidlalo yamanzi kwiilwandle ezikufutshane okanye uhambo olukhuthazayo ukuya kwi-headland. Buyela kwindlu yangoku nenemibalabala eneendawo ezininzi ezipholileyo zokutshaja, ngaphakathi nangaphandle. Phumla ecaleni kwedama okanye uqubhe imijikelo ethile. I-airconditioning kwigumbi eliphezulu kwigumbi lokuhlala / lokuh…
“Imizuzu ukuya kwikhefu elidumileyo lokusefa, ukuhamba ngeenyawo, ukuqubha okukhuselekileyo elwandle kunye nomoya opholileyo welali.”
- John And Libby, umbuki zindwendwe wakho
Ifeni esesilingini, I-Queen bed, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama
Ibhedi elala umntu omnye, Ifeni esesilingini, I-King bed, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama
Ifeni esesilingini, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-King bed, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Izinto zokugquma iiplagi
4.98 (iingxelo zokuhlola 160)
Indlu ikwidolophu engaselwandle yaseLennox Head. Hamba uye kwiindawo zokutyela ezigqwesileyo kunye neekhefi, iivenkile ezinkulu, ivenkile yokutya okunempilo, indawo yokubhaka kunye neevenkile zokusefa. Kufuphi neLake Ainsworth yeyona ndawo ifanelekileyo yeepiknikhi kunye nokuhamba ematyholweni. Ibhodi yokubheqa echibini naselwandle. Amathuba amahle kakhulu okusefa.
I-Byron Bay yimizuzu engama-20 ukuya emantla. I-Ballina yimizuzu eli-10 yokuqhuba ukuya emazantsi.
Ukuhamba elwandle, ukuqubha elwandle kunye nokubukela umnenga phakathi kukaJuni noSeptemba kuyinto entle kakhulu.
Umgama ukusuka eBallina Byron Gateway Airport
imizuzu eyi-15 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- John And Libby
UJohn And Libby yi-Superhost
Inombolo yomthetho: PID-STRA-24041-2
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$528
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lennox Head